Pang Moakun kunye nomfazi kwikhekhe yakhe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iveki enye ode ukuya kumfazi nakumfazi. UVicente Romero, ngoLwesithathu odlulileyo, Tordesillas, Ngolwesine kunye Sai kwangolo suku lunye yemvukelo engaphakathi.
Sijonge ngqo kwi ubuhle obungenakubalwa bekhekhe I-Pang Maokun, ukujonga kwayo ngokungathi sisipili, ubomi bemihla ngemihla besofa okanye iminyaka yokuqala yokutsha. Izichazi kunye namagama ukuchaza into ethile kubugcisa beMaokun, ukuthanda ikhekhe.
UPang Maokun wazalelwa eChongqing, China e-1963 kwaye ukhuthazeka ngakumbi yeyakhe ukuhlola ngokwasemoyeni okuzimeleyo nendalo yobugcisa. Singayifumana le kwimisebenzi eyahlukeneyo apho sifumana iindlela ezahlukeneyo kunye neendlela. Umzobi ongathandi ukuhlala kwindawo yakhe yokunethezeka, kodwa endaweni yoko uphonononga abanye, mhlawumbi azilahlekele okanye azifumane kwakhona, njengePhoenix.
UMaoukun waphumelela iSichuan Academy of Fine Arts Subsidiary ngo-1981 ukuba abe nguNjingalwazi ukusukela ngo-1993, njengoko ndikwazile ukubhala. Abasetyhini yeyona ndawo iphambili yokuhlangana kwimisebenzi yakhe emininzi. Pinta kulo mfazi kwiimvakalelo zakhe kunye nomhlaba wayo ujonge kubunzulu obunokuthi bunokuthetha ukuba sibambelele emhlabeni.
Unayo iwebhusayithi yakho kweli qhagamshelo, apho unokufumana khona imiboniso yakhe. Ngethamsanqa elikhulu ukukwazi ukujonga loo mfazi ukhethekileyo kwaye ukude kuninzi lwemisebenzi yakhe. Njengale nkwenkwezi ifunyenwe ebusuku ofuna ukuyichukumisa, kodwa iminyaka elula kude nayo.
Isuka kwiwebhusayithi yakhe apho uMaokun ecacisa khona Inxalenye yesiphelo sakhe okanye isizathu sokuba ipeyinti kunye nonyango olukhethekileyo kwikhekhe. Umzobi obonakala ngokulula kwaye esinokubhenela kuye ngamanye amaxesha ngezi zithuba zibonakalayo. Umzobi waseTshayina ozimeleyo kunye nokomoya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umfazi kaPang Maokun
UJose Rodriguez sitsho
Into ekufuneka yenziwe ngabaqulunqi: ikhathalogu yasimahla ekwi-Intanethi yePantone